कसरी आईओएस ११ बाट आईओएस १०..9.1..9.0.2 मा डाउनग्रेड गर्ने आईफोन समाचार
कसरी आईओएस ११. from बाट आईओएस ११..9.1.१ मा डाउनग्रेड गर्ने
सधैं जस्तो, जब आईओएसको नयाँ संस्करण जारी हुन्छ, यसले आफ्ना अनुयायीहरू र यसको डिटेक्टरहरू सिर्जना गर्दछ। IOS संस्करण .9.1 .१ हिजो बिहान :19:०० बजे हाम्रो उपकरणमा आईपुग्यो। यस्तो पनि हुन सक्छ कि तपाईंले अनावश्यक रूपमा डाउनलोड र आईओएस .00 .१ स्थापना गर्नुभयो र तपाईंले आफ्नो उपकरणको प्रदर्शनमा बिग्रिएको भन्ने महसुस प्राप्त गर्नुभयो। व्यक्तिगत रूपमा यदि तपाईले हामीलाई नियमित रूपमा पढ्नु भयो भने तपाईले अवलोकन गर्न सक्षम हुनुभयो कि मैले एउटा आलोचनात्मक लेख लेखेको छु जसमा म आईओएस .9.1 .१ को बारेमा राम्रोसँग कुरा गर्छु, तर प्रत्येक उपकरण एक विश्व हो, त्यसैले यदि तपाइँले आईओएस .9.1 .१ लाई कुनै पनि कारणको लागि मनपर्दैन भने, वा तपाईं केहि प्रकारको बग वा समस्यालाई तान्नुभयो र तपाईं आईओएस .9.1.०.२ मा फर्कन चाहानुहुन्छ, यदि जेलब्रेया मात्र गरे पनि, आईफोन न्यूजमा हामी तपाईंलाई हामी आईओएस .9.0.2 .१ बाट आईओएस .9.1 .०.२ मा कसरी फर्कने भन्ने बारे एक ट्यूटोरियल ल्याउँछौं।
1 प्रारम्भिक विचारहरु
2 कसरी आईओएस ११. from बाट आईओएस ११..9.1.१ मा डाउनग्रेड गर्ने
तपाईं आईओएस 9.0.2 .०.२ भन्दा पहिले कुनै संस्करणमा फिर्ता जान सक्नुहुन्न, किनकि ती हस्ताक्षरित छैनन्, त्यसैले अघिल्लो संस्करण डाउनलोड गर्दा तपाईंलाई कुनै फाइदा हुनेछैन।
हामी केवल आईओएस .9.0.2 .०.२ मा छोटो समयको अवधिमा डाउनग्रेड गर्न सक्छौं कि एप्पल र यसको सर्भरहरूले यस संस्करणलाई प्रमाणिकरण गरिरहेका छन्, त्यसैले यदि तपाईं आईओएस संस्करण डाउनलोड गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो अहिले वा कहिल्यै होईन।
ICloud वा iTunes मा तपाईको IOS उपकरणको ब्याकअप गर्न नबिर्सनुहोस्, जसलाई तपाईं सबै भन्दा मन पराउनुहुन्छ वा तपाईंमा धेरै भरोसा उत्पन्न गर्नुहुन्छ।
याद गर्नुहोस् कि यसले प्रत्येक अपडेटको सुरक्षा कार्यहरू हराउँदछ।
आईओएस .9.0.2 .०.२ संस्करण अझै हस्ताक्षर गरिएको छ भनेर जान्नको लागि, तपाईं यो लिंक प्रविष्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
डाउनलोड गर्नुहोस् आईओएस .9.0.2 .०.२ तपाईंको सामान्य स्रोतबाट वा www.GetiOS.com बाट
हामी आईओएस .9.0.2 .०.२ फर्मवेयर अघिल्लो सिफारिश साइटहरु बाट डाउनलोड गर्छौं। तपाइँको उपकरण संग एक एक डाउनलोड गर्न को लागी याद गर्नुहोस्, तपाइँ उपकरणको पछाडि प्रदर्शित अक्षरहरु मा हेर्न सक्नुहुन्छ पत्ता लगाउनको लागि।
उपकरणलाई DFU मोडमा राख्नुहोस्: यसो गर्नका लागि उपकरणलाई iTunes मा जडान गर्नुहोस्, त्यसपछि प्लग इन भएको बेला बन्द गर्नुहोस्। अब १० + सेकेन्डको लागि थिचेको होम + पावर बटन पठाउनुहोस् र त्यस समयावधि पछि पावर बटन रिलीज गर्नुहोस्, तर होम बटन होइन, आईट्यून्स छवि आईफोन स्क्रिनमा प्रदर्शित नभएसम्म।
अब आईट्यून्समा, जब उपकरण जडित छ र पत्ता लगाइन्छ, "आईटोर रिस्टोर" मा "Alt" कुञ्जी थिच्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस् यदि तपाई म्याकोस प्रयोग गर्नुहुन्छ वा "शिफ्ट" यदि तपाई विन्डोज प्रयोग गर्नुहुन्छ भने।
तपाईंले डाउनलोड गर्नुभएको .psw फाईल चयन गर्नुहोस् र पुनर्स्थापनाको लागि यसको लागि प्रतिक्षा गर्नुहोस्।
र भोईला, तपाईं आईओएस .9.0.2 .०.२ मा हुनुहुनेछ, कम्तिमा यो संस्करणमा हस्ताक्षर गरिएको छ, त्यसैले तपाईं जेलब्रेक गर्न सक्नुहुनेछ, अन्य चीजहरू मध्ये, जुन आईओएस .9.1 .१ मा बन्द गरिएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी आईओएस ११. from बाट आईओएस ११..9.1.१ मा डाउनग्रेड गर्ने
खैर यो पहिले नै एक sindos छ!
IOS .9.0.2 .०.२ संस्करण अझै हस्ताक्षर गरिएको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन, तपाईं यो लिंक प्रविष्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। कुन लिंक?
त्यहाँ तपाईं विभिन्न उपकरणहरूको लागि सबै आईओएस डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र संकेत गर्नुहोस् कि कुनचाहिँ अझै हस्ताक्षरित छन् https://ipsw.me/
शंका, के कसैले आईप्याड २ मा आईओएस tried को प्रयास गरेको छ?
अहिले मँ आईओएस on मा छु र भविष्यमा गर्न सकिने अनुप्रयोगहरूका नयाँ अनुप्रयोगहरू वा अद्यावधिकहरूको पहुँच पाउनका लागि म आईओएस to लाई अपडेट गर्ने विचारमा छु।
मेरो हालको प्रयोग ब्राउजि,, ट्वीटर, टापटक, युट्यूब, र भिडियो प्लेहरूको लागि हो। म प्रदर्शन र अरूको टिप्पणी गर्छु।
Efrit लाई जवाफ दिनुहोस्
जोसे एड्रियन मेन्डोजा गार्सिया भन्यो
हो, र यो राम्रो भइरहेको छ
जोसे एड्रियन मेन्डोजा गार्सियालाई जवाफ दिनुहोस्
म आईप्याड २ अपडेट गर्दिन जबसम्म यो स्पष्ट हुँदैन कि यो आईओएस2भन्दा राम्रो छ। म आईपड हावामा आईओएस .8.१.२ मा अझै पनी छु र म पढेको कुराबाट by .०.२ ले विश्वास गरेको छैन, म चाहान्छु कि म 8.1.2.१.२ को प्रयास गर्न सक्दछु। समस्या यो हो कि ती अनुप्रयोगहरूले तपाईंलाई ओएसको नयाँ संस्करणहरू आवश्यक पर्दछ। यसका साथै यो उत्तम जान्छ म जेलब्रेक गर्न सक्षम हुन चाहन्छु, मेरो लागि केही आवश्यक छ।
हो, मँ यसलाई जेलब्रोन गर्न पनि चाहान्छु किनकी आईप्याडलाई मिडियासेन्टरको रूपमा प्रयोग गर्छु र मसँग एक्सबीएमसी स्थापना भएको छ। यसैले म अहिले to देखि from मा अपडेट गर्न भन्दै थिए किनकि .7 .०.२ सँग जेलरोब छ, तर .9 .१ अहिले उनीहरूले नाइँ भनेका छन्।
तर यसले मलाई अनुप्रयोग अपडेटहरू र त्यस्तै गरी टाँस्यो। यद्यपि मैले प्रदान गरेको प्रयोग नेभिगेशनमा बढी छ किनकि मैले भनें र यो मेरो लागि कम महत्त्वको छ, तर यदि मैले बोर्ड खेल अनुप्रयोगहरू स्थापना गरेको छु र म नयाँ आईप्याड सत्यको लागि बाकसको माध्यमबाट बिना नयाँ कुरा गर्ने छैन।
डानियल रुइज भन्यो
माफ गर्नुहोस्, मेरो अज्ञानता, तर यसको मतलब के हो भने यो संस्करणमा हस्ताक्षर भएको बेला तपाईं कम्तीमा पनि रमाउन सक्नुहुन्छ? मेरो सेल फोन (आईफोन)) अपडेटले असर गरेको छ र म यसलाई अघिल्लो ओएसमा फिर्ता गर्न चाहन्छु।
जे भए पनि धन्यवाद
डेनियल रुइजलाई जवाफ दिनुहोस्
कुल धन्यवाद ...।
यदि मैले ब्याकअप गरेमा, पुनः भण्डारण गर्ने क्षणमा मैले केहि गुमाउने छैन वा मैले अनुप्रयोगहरू पुन: स्थापना गर्नुपर्दछ?
Yurgen लाई जवाफ दिनुहोस्
मिगेलले तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद, उनले मलाई मद्दत गरे, यर्गनले केही पनि गुमाउँदैन तर सबै खेलहरू डाउनलोड नभएसम्म अनुप्रयोगहरू खेलहरू होल्डमै रहन्छन्, तपाईं आइकनहरू देख्नुहुन्छ तर तिनीहरू डाउनलोड नभएसम्म तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
हेभरलाई जवाफ दिनुहोस्
जब म यो गर्छु, मलाई बताउँछ कि यो अनुकूल छैन, र मैले सोही पृष्ठबाट यसलाई डाउनलोड गरेको छु।
यसले मलाई उही कुरा बताउँछ: यो अनुकूल छैन जुन म आईओएस .8.4..9.1 मा थियो र म आईओएस .9.0.2 .१ मा गएँ र जब म आईओएस .XNUMX .०.२ मा जान चाहान्छु (जुन मेरो आईफोनमा कहिल्यै थिएन) यसले मलाई बताउँछ कि यो हो उपयुक्त छैन। र अब न तोडने वा न। त्यो नराम्रो।
ABDEL लाई जवाफ दिनुहोस्
शुभ दिउँसो, मलाई तपाईले सूचित गर्नुभएको पृष्ठबाट फाइल डाउनलोड गर्ने समस्या छ, तर भित्र आईपस्वा स्वरूपका साथ कुनै फाइल छैन, के कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ? अग्रिम धन्यवाद
तपाईले कसरी आफ्नो समस्या समाधान गर्नुभयो? इवान, उही चीज मलाई देखा पर्दछ
म आईओएस .8.4..9.1 मा थिए र म आईओएस .9.0.2 .१ मा गएँ र जब म आईओएस .XNUMX .०.२ मा जान चाहान्छु (जुन मेरो आईफोनमा कहिल्यै थिएन) यसले मलाई भन्दछ कि यो उपयुक्त छैन। र अब न तोडने वा न। त्यो नराम्रो।
मलाई पनि त्यस्तै भयो, मित्र, के तपाईंले समाधान फेला पार्नुभयो?
उस्तै चीज मलाई पनि हुन्छ, यसले मलाई यो अनुकूल छैन तर यो अझै हस्ताक्षर गरिएको हो ,,, म केहि बुझ्दिन, ,, समाधान ???
यदि यसले भन्छ कि यो उपयुक्त छैन, यो यस्तो छ किनकि तपाईं आफ्नो टर्मिनलमा उपयुक्त आईओएस डाउनलोड गरिरहनु भएको छैन
होईन, मसँग आईफोन plus प्लस छ र मैले उसको आईओएस डाउनलोड गरेको छु र मैले यो विभिन्न पृष्ठहरूबाट गरे तर केही पनि होइन।
यो मेरो आईप्याड मिनीको साथ पनि भैरहेको छ जुन मैले सिधै आईओएस .9.1 .१ मा अपडेट गरें र जब आईओएस .9.0.2 .०.२ मा फिर्ता जान चाहन्छु यसले मलाई अनुकूल बनाउँदैन भनेर भन्छ।
मसँग त्रुटि पनि पाइन्छ कि फर्मवेयर उपयुक्त छैन, र म १००% निश्चित छु कि म आफ्नो आईफोनसँग सम्बन्धित एउटा डाउनलोड गर्छु र मैले यो प्रमाणित गरें कि यो आईफोन s एस जीएसएम संस्करण हो र मैले फर्मवेयर डाउनलोड गरेको छु र केहि पनि छैन, म उही ईरोर पाउछु! के कसैलाई केहि समाधान थाहा छ, जुन मैले आईओएस .100 .०.२ राखे पछि मेरो ब्याट्री थोरै रहन्छ र म नयाँ आईफोनको रूपमा राख्ने हो भने यसलाई समाधान गर्ने हो कि यदि म आईओएस .5 .१ मा अपडेट नगरीकन जेलबाट छुटेको कुर्ने प्रतीक्षा गरिरहेको छु भनेर हेर्न चाहन्थें। तर म जेल सत्य खोल्न चाहन्न ...
Sergifunaifunai लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, म IOS मा छु 8 के म .9.02 .०२ लाई पुन: स्थापित गर्न सक्छु आईफोन लाई DFU मोडमा राखेर? वा, जब एप्पलले IOS 9.1 मा पुनर्स्थापित गर्न मात्र विकल्प विकल्पमा हस्ताक्षर गर्न रोक्दछ? धन्यबाद
म पनि त्यस्तै अवस्थामा छु! गल्तीले म आफ्नो आईओएस आईओएस .9.1 .१ मा अपडेट गर्दछु तर म डाउनग्रेड गर्न चाहन्छु तर यसले मलाई अनुमति दिँदैन, यसले त्रुटि चिन्हित गर्दछ, र म निश्चित छु कि यदि मैले संकेत गरिएको सफ्टवेयर डाउनलोड गरें भने ... म फेरि 9.0.1 .० मा जान चाहन्छु। १, कसैसँग डाउनलोड गर्न को लागी एक लिंक छ मैले त्रुटि जाँच नगरी? धन्यवाद!!!
माफ गर्नुहोस् IOS। .9.0.2 .०.२
तपाईं पछाडि जान सक्नुहुन्न किनकि एप्पलले त्यो संस्करणमा हस्ताक्षर गर्न रोकेको छ। अभिवादन। सँधै याद गर्नुहोस्, जब एप्पल सफ्टवेयरमा हस्ताक्षर गर्न रोक्दछ, तपाईं अब फिर्ता गर्न सक्नुहुन्न (परम्परागत तरिकामा होईन)
म कसरी ios 9.0.2 मा फिर्ता जान सक्छ, यो जरूरी छ
तपाईं अझै 9.1 .१ देखि .9.0.2 .०.२ मा डाउनग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ मलाई सूचित गर्न सक्नुहुन्छ, धन्यवाद
राम्रो राम्रो, म हिजो एप्पल स्टोरमा थिए किनभने आईफोन of को स्क्रिन बिग्रिएको थियो। उनीहरूले मलाई नयाँ दिए जस्तै। परिवर्तन गर्नु अघि मैले आइकलाउडमा ब्याकअप गरें।
अब म नयाँ सेल फोन खोल्छु, र रिलमा मसँग एक फोटो छैन। त्यो मात्र होईन, तर म नयाँ फोटोहरू लिन्छु र ती पनि रिलमा जान सक्दैनन्।
बिभिन्न व्हाट्सएप कुराकानीका फाईलहरू पनि हराए। म सम्पर्कमा छु र यदि, उदाहरणका लागि, हामीसँग files०० फाईलहरू थिए, मसँग अझै 500०० फाइलहरू छन्, तर म त्यसलाई हेर्न खोल्छु र सेतो वर्गहरू खैरो प्रश्न चिन्हको साथ देखा पर्दछ।
के यो पहिले नै कसैलाई भएको छ?
मलाई कसरी मद्दत गर्ने थाहा छ?
गर्न सकिन्छ ?
मसँग एक महिना अघि मेरो ss मा .9.1 .१ छ र यो मेरो लागि धेरै खराब भएको छ; यो ढिलो छ। त्यसोभए, म जान्न चाहन्छु कि म अघिल्लो संस्करणमा आज म फेरि जान सक्छु? 🙁 र डाउनलोड लिंक के हुनेछ? कृपया, म यसको कदर गर्दछु।
उत्कृष्ट कि यस्तो राम्रो र साधारण व्याख्या यस प्रकार जारी रहन्छ
"मित्रहरू फेला पार्नुहोस्" वेब आईक्लाउड.कटबाट उपलब्ध छ
FullFolder9, फोल्डरहरूमा अधिक अनुप्रयोगहरू देखाउनुहोस्